ကြင်နာစွာအသိပေး: Do သင့်ရဲ့အသေးစားကွန်ကရစ် Pump Truck ကားမဖြုန်းတီး! - တရုတ် Qingdao CO-NELE Group မှ
ကြင်နာစွာအသိပေး: Do သင့်ရဲ့အသေးစားကွန်ကရစ် Pump Truck ကားမဖြုန်းတီး!
အသေးစားကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအသုံးများဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအင်ဂျင်နီယာ construction.However အတွက်အသုံးပြုသည်, ဆောက်လုပ်ရေးကာလ၏နှောင့်နှေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်ဒီအမြင်အတွက် machine.So ၏ပျက်ပြားအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရသောကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအချို့သောအမှားများရှိလိမ့်မည် ပြဿနာရဲ့တစ်ချိန်ကမှာသေးငယ်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့သေးငယ်တဲ့ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားအတူတကွ၏ညာဘက်အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းနားလည်ကြကုန်အံ့။
အချို့အော်ပရေတာချပေးမတိုင်မီရေချောမွေ့ပိုက်လိုင်း၏ညာဘက်ငွေပမာဏကိုစုပ်ဖို့အသေးစားစုပ်စက်ထရပ်ကားလိုအပ်ရှည်လျားသောပိုက်သူတို့ကို smooth.In တကယ်တော့စောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရေနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်သင့်ကြောင်းနားလည်မှုလွဲခြင်းအလွန်အကျွံရေဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်း pumped လျှင်, အချို့ရှိလိမ့်မည် ပျက်စီးသွားသောနှင့် pipes.Investigate အတွက်ကွင်းယင်း၏အကြောင်းပြချက်ပေါက်ကြားမော်တာနှိပ်သောအခါ, မော်တာနဲ့ရေထိတွေ့မှုအချိန်ကြာမြင့်စွာရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရပါသောအင်တာဖေ့စ, ရေဘိလပ်မြေ slurry ဝေးကြာ, ပုံစံမော်တာအသားအရောင်ခွဲခြား, ဘုံဘိုင်ခုခံတိုးကိုအကြောင်းမရှိဘိလပ်မြေ slurry ပျက်စီးနေသောသားရေလက်စွပ်၏အရပျမှ extrude ရန်, ထို့နောက်ပိတ်ဆို့ပြွန်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ခ Do ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေနှင့်အတူရေတိုင်ကီဖြည့်ပါ; လီသီယမ်အခြေစိုက်စခန်းဆီချောမွေ့ရေနံနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့အမဲဆီစုပ်စက်၏အကြံပေးအဖွဲ့ဖြည့်
သည့်မျက်မှန်ပန်းကန်၏ကွာဟချက်ကြီးမားလွန်းမဖြစ်သင့် C. , မဟုတ်ရင်အဲဒါကိုကြောင့်ပြည်တွင်းရေးယိုစိမ့်မှတူအခွအေနေစေမည် ပျော့ဖတ်၏; မြင့်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဖိအားနှင့်အဓိကဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆို့ရှင်၏လျတ်စဉ်းစား, အဓိက system ကိုဖိအား 28MPa မှချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ခုခံချပေး 1, သေးငယ်တဲ့ pump ထရပ်ကားရှည်လျားသောအကွာအဝေး, အကွေးချဖြတ်ဖို့ကြိုးစားများနှင့်ဝေးသေးငယ်တဲ့ bend.Practice 90o အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအပိုဆောင်းကွေးကြောင်းသက်သေပြလျက်ရှိသည်ထက်တတ်နိုင်သမျှရွေးချယ်သင့်× R10005သန်းနဲ့အလျားလိုက် tube.Therefore ဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ညီမျှသည်သာ412 90o × R1000 ကွေးပိုက် layout ကိုအတွက်အသုံးပြုလျက်, အခြားသူများကို 310m စုစုပေါင်းအရှည် 12 ×3မီတာဖြောင့်ပိုက်နှင့် 12 ×2မီလီယံဖြောင့်ပိုက်, ကြ၏။
ပိုက်၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပိုက်များစွဲစေရန် 2.Pay အာရုံစူးစိုက်မှု။ long-အကွာအဝေးစုပ်စက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ထိုးနှက်ကွေ့များတွင်သက်ရောက်မှုနှင့်အချို့သောဖြောင့်မှုကိုလျှော့ချဖို့အပြည့်အဝအားဖြည့်ဖို့သတိရပါ out.So ခုန်ဖို့ပြွန်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
3. မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းပြီးနောက်ပိုက်လိုင်းအချိန်မီသန့်ရှင်းခံရကြလိမ့်မည်နှင့်ပိုက်လိုင်းကိုပိုပြီးဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်နှင့် security.What ရဲ့အလယ်ဗဟိုကနေနှစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု, အ plug ကိုရေမြှုပ်ဘောလုံးကိုအတွက်နှစ်ခုမြှုပ်ဘောလုံးနှင့်အတူတစ်ဦးဘိလပ်မြေအိတ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်သင့်ကြောင်း, ပေါင်းတစ်သန့်ရှင်းရေးပစ္စတင်။
Post ကိုအချိန်: ဒီဇင်ဘာ-25-2019